Nnwale Afọ Asaa - Nkebi nke M - Okwu A Ugbu a
Gụkọta na Alaeze ahụ
Egwu & Ihe
AKW MAKWỌ NKE ELUIGWE
Okwukwe na omume
ND SE MMAD SE NA FBỌR.
PARALYZED BY ARjọ
Afọ asaa na ọnwụnwa
AKW FKWỌ EZINAMLỌ
IHE Ise OVda
Eziokwu siri ike
OZI WARDỌ AKA NA NT WAR!
WEBCAST & vidiyo
EBE EGO ELUIGWE
N'IHI gịnị Katọlik?
Ihe nzacha aka
Ederede zoro ezo
Nnwale Afọ Asaa - Nkebi nke Mbụ
Ihe na Nwere ike 28, 2008 Nwere ike 8, 2018 by Mark
Opi nke ningdọ aka na ntị-Nkebi nke V tọrọ ntọala maka ihe m kwenyere na-abịarute ọgbọ a ọsọ ọsọ. Foto a na-apụtawanyewanye ìhè, ihe ịrịba ama na-ekwu okwu karịa, ikuku mgbanwe na-akawanye njọ. Yabụ, Nna anyị dị nsọ lere anyị anya ọzọ, sị, “olileanya na”… Maka ọchịchịrị na-abịanụ agaghị enwe mmeri. Usoro edemede a lebara anya na “Ikpe afọ asaa” nke nwere ike ịbịaru nso.
Ntụgharị uche ndị a bụ mkpụrụ nke ekpere n’onwe m iji ghọtakwuo nkuzi Churchka na Isi nke Kraịst ga-eso Onye isi ya site n’ọchịchọ nke ya ma ọ bụ “ikpe ikpe ikpeazụ,” ka ndị Catechism si kwuo. Ebe ọ bụ na akwụkwọ Mkpughe kwuru otu akụkụ na ikpe ikpe ikpeazụ a, achọpụtara m ebe a ịkọwa nkọwa nke Apocalypse nke St John tinyere ụkpụrụ nke Obi ọmịiko Kraịst. Onye na-agụ ya kwesịrị iburu n’uche na ndị a bụ echiche nke aka m na ọ bụghị nkọwa doro anya nke Mkpughe, nke bụ akwụkwọ nwere ọtụtụ nkọwa na akụkụ ya, ọ bụghị nke kachasị, nke eschatological. Otutu nkpuru obi di nma adabala na ugwu di elu nke Apocalypse. Otu o sina dị, ahụwo m na Onye-nwe-anyị manyere m ije ije n'okwukwe site n'usoro isiokwu a. M na-agba onye na-agụ ya ume ka o jiri nghọta ha mee ihe, nke Magisterium na-akụzi ma na-eduzi.
OKWU NKE OGUGU
N’ime Oziọma ndị dị asọ, Jizọs gwara ndịozi ahụ okwu banyere “oge ikpe-azụ,” na-enye ihe atụ nke ihe ndị ga-eme n’oge na-adịghị anya ma dị anya. Ihe osise a gụnyere ihe omume mpaghara, dịka mbibi nke ụlọ nsọ dị na Jerusalem na 70A.D., yana ihe omume sara mbara dịka esemokwu dị n'etiti mba dị iche iche, ọbịbịa nke onye na-emegide Kraịst, nnukwu mkpagbu wdg. Jizọs yiri ka ọ na-ekwupụta ihe omume na oge. N'ihi gịnị?
Jisos mara na akwukwo Daniel bu kaa akara, imeghe ya rue “oge ikpe azu” (Dan 12: 4). Ọ bụ uche Nna ka ọ bụrụ naanị “eserese” nke ihe gaje ịbịa ka enye ya, ma kpughee nkọwapụta ya n’ọdịnihu. N'ụzọ dị otú a, Ndị Kraịst oge nile ga-anọgide 'na-eche nche ma na-ekpe ekpere.'
Ekwenyere m na akwụkwọ Daniel ekpuchighi, na peeji ya na-agbanwe ugbu a, otu na otu, nghọta anyị na-emiwanye kwa ụbọchị na "mkpa ịmara".
Akwụkwọ nke Daniel na-ekwu maka onye na-emegide Kraịst nke gosipụtara na ọ ga-eme ka ọchịchị ya pụta na ụwa maka "izu".
Ya na ọtutu madu g shallme kwa ọb covenantub covenanta-ndu siri ike; na ọkara nke izu ọ ga-eme ka àjà na onyinye kwụsị; ọ bu kwa na nkù nke ihe-árú nile ka onye nākpata itọb comeọrọ-n'efu biakwasi, rue mb ise agāwukwasi nkwusi iwu ahu nye onye tọblatorọrọ n'efu. (Dan 9: 27)
Na akara agba ochie, nọmba “asaa” na-anọchi anya ya zuru ezu. N'okwu a, ikpe ziri ezi na nke Chineke ndụ (ọ bụghị Ikpeazụ Ikpeazụ), ka a ga-ekwe ka akụkụ ụfọdụ site na “onye tọgbọrọ n’efu” a. “Ọkara izu” ahụ Daniel na-ezo aka na ya bụ otu ihe atụ afọ atọ na ọkara jiri ya mee nkpughe na oge onye a na-emegide Kraist.
E nyere anụ ọhịa ahụ ọnụ na-ekwu okwu nganga na nkwulu, e nyekwara ya ikike ime ihe ọnwa iri anọ na abụọ. (Mkpu. 13: 5)
N’ihi ya, “izu” ahụ pụtara “afọ asaa.”
Anyị na-ahụ ụdị nke afọ asaa a n'ime Akwụkwọ Nsọ. Nke kacha dị mkpa bụ oge nke Noa mgbe, ụbọchị asaa tupu iju mmiri ahụ, Chineke kpọbatara ya na ezi na ụlọ ya n'ime ụgbọ (Jen 7: 4). Ekwenyere m Ìhè ahụ ga-amalite oge dị nso nke Nnwale Afọ Asaa nke nwere abụọ afọ atọ na ọkara. Nke a bụ mmalite nke Ubọchi nke Onye-nwe-ayi, mmalite nke ikpé nke ndị dị ndụ, malite n’ Churchka. Ọnụ ụzọ nke Igbe ahụ ga-emeghe, ọbụlagodi n'oge oge nke onye ahụ na-emegide Kraịst (ọ bụ ezie na St. John na-egosi n'oge niile nke onye ahụ na-emegide Kraịst yana nrụgide ndị na-eso ya na ndị mmadụ agaghị echegharị), mana ọ ga-emechi na njedebe nke ikpe mgbe ndị Juu agbanweela. Mgbe ahụ ga-amalite Ikpe nke ndị na-echegharịghị na a idei oku.
N'ihi na oge eruwo ka ikpé malite n'isi ezinụlọ Chineke; ọ bụrụ na ọ ga-esi n’aka anyị malite, olee otu ọ ga-esi bụrụ maka ndị na-erubeghị ozi ọma nke Chineke? (1 Pita 4:17)
ABỌ AB TWOỌ
Mkpughe na-ezo aka na owuwe ihe ubi abụọ. Akpa, Owuwe ihe ubi nke ọka nke Jisos tinyere, obughi na njedebe nke uwa, kama na njedebe nke afọ.
Mọ-ozi ọzọ we si n'ulo uku Chineke puta, were oké olu tie onye ahu nke nọkwuru igwe-oji ahu, si, Were mma-iwe-ihe-ubi-gi we ihe-ubi, n'ihi na owuwe-ihe-ubi abiawo, n'ihi na ihe-ubi nke uwa achawo acha. Onye ahu Nke nānọkwasi n'igwe-oji ahu we ju mma-iwe-ihe-ubi-ya n'elu uwa, ewe ghọrọ uwa dika nkpuru. (Mkpu 14: 15-16)
Ekwenyere m na nke a bụ nke mbụ afọ atọ na ọkara soro Illumination. Ndi foduru ghaa nma iwe ihe-ubi nke okwu Chineke, ikwusa ozioma, ma kpokota ndi nabatara ebere ya n’ime Igbe ahu “n’ime ọba” ya.
Agbanyeghị, ọ bụghị mmadụ niile ga-agbanwe. N'ihi ya, oge a ga-ewepụkwa ata ahụ site n'ọka wit.
… Oburu na i fohapu ata, i nwere ike ifo ọka wit na ha. Ka ha too n’otu rue owuwe ihe ubi; ma mb timee owuwe-ihe-ubi M'gāsi ndi n thewe ihe-ubi, Buru uzọ chịkọputa ata ahu, kekọta ha n'ùkwù-ọka; ma kpokọta ọka wit n’ime ọba m… Owuwe ihe ubi bụ njedebe nke ụwa, ndị na-ewere ya bụ ndị mmụọ ozi. (Mat 13: 29-30, 39)
Ahịhịa ahụ bụ ndị ahụ si n’ezi ofufe dapụ bụ ndị nọgidere na Chọọchị ma na-enupụ isi megide Kraịst na onye nnọchi anya ya n’ụwa, Nna Dị Nsọ. Ndapụ n'ezi ofufe anyị na-ebi ugbu a ga-apụta ìhè n'ihu ọha na a ndudue kere site na ndi na-agbanweghi site na Ihe omuma. Terkpụrụ kanta na-abịanụ ga-abụ dị ka sieve nke 'ga-achịkọta' ndị jụrụ ịnabata Jizọs, Eziokwu, n'aka ndị na-eso ụzọ Ya. Nke a bụ Nnukwu ndapụ n’ezi ofufe nke ga-akwadebe ụzọ maka Onye ahụ Na-emebi Iwu.
Ndị nabatara Jizọs ga-aka ndị mmụọ ozi Ya dị nsọ akara, ndị na-ewe ihe ubi:
Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m ndị mmụọ ozi anọ ka ha na-eguzo n'akụkụ nkuku anọ nke ụwa, na-egbochi ifufe anọ nke ụwa ka ifufe ọ bụla wee ghara ife n'elu ala ma ọ bụ n'oké osimiri ma ọ bụ megide osisi ọ bụla. M wee hụ mmụọ ozi ọzọ ka o si n’Ọwụwa Anyanwụ rịgoo, na-ejide akara nke Chineke dị ndụ. O we were oké olu tie ndi-mọ-ozi anọ ahu ndi enyere ike ibibi ala na oké osimiri, (Mkpu 7: 1-3)
Ugbu a, ị hụla ihe kpatara anyị ji enwe mmetụta ifufe nke mgbanwe na ala-eze site na ngosipụta nke oke-ifufe dị ike: anyị na-eru nso na ụbọchị nke Onye-nwe-anyị mgbe oge ebere ga-agwụ ma ụbọchị ikpe-ikpe malite! Mgbe ahụ, ndị mmụọ ozi nọ na nkuku anọ nke ụwa ka a ga-ahapụ kpamkpam maka ikpe nke ndị ahụ na-akapịghị akara. Nke a bụ nke abụọ owuwe ihe ubi, na Owuwe ihe ubi nke mkpụrụ vaịn- ikpe mara mba ndị na-echegharịghị.
Mọ-ozi ọzọ we si n'ulo uku Chineke nke di n'elu-igwe puta, onye nwere mma-iwe-ihe-ubi-ya di nkọ: Use were mma-iwe-ihe-ubi-gi di nkọ, bipu nkpuru-vine nke uwa, n'ihi na nkpuru-ya achazuwo. Mmụọ ozi ahụ wee jiri mma owuwe ihe ubi ya gbasaa n’elu ụwa wee bie mkpụrụ vaịn ndị dị n’ụwa. Ọ tubà ya n’ebe-nzọcha-nkpuru-vine nile nke ọnuma Chineke. (Mkpu 14: 18-19)
Owuwe ihe ubi nke abụọ a na-amalite site na nke ikpeazụ afọ atọ na ọkara n’oge ọchịchị nke emegide Kraịst, ma na-ejedebe na mkpocha nke ajọọ-omume niile n’ụwa. N'ihi na ọ bụ n'oge a ka Daniel na-ekwu na onye tọgbọrọ n'efu ga-akwụsị aja a na-achụ kwa ụbọchị, ya bụ, Mass dị Nsọ. Nke a ga-eweta ahụhụ n'elu ụwa a na-enwetụbeghị ụdị ya ma n'okike ma na mpaghara ime mmụọ. Dị ka St. Pio tinye ya:
Ọ dịịrị ụwa mfe ịnọ n’anyanwụ karịa n’enweghị Mas.
Na Akụkụ nke Abụọ, ileru anya nke ọma n'oge abụọ nke Nnwale Afọ Asaa.
Gbasaa Okwu Ugbu a!
Ihe na ỤLỌ, Afọ asaa na ọnwụnwa, AKWUKWO OGUGU.
← Ihe Fromrịba Ama Sitere n’eluigwe
China na-ebili →
AKW MAKWỌ NKE ELUIGWE (5)
Bido ọzọ (5)
OBI OMA? (7)
Okwukwe na omume (180)
ND SE MMAD SE NA FBỌR. (7)
UM UMUAKA (311)
ỌTỤTỤ MILLENARI (11)
AKW TKWỌ M (5)
PARALYZED BY ARjọ (37)
Ekpere na-echighachi (44)
Afọ asaa na ọnwụnwa (11)
CHINEKE GA EBU (24)
Oge udo (77)
AKW FKWỌ EZINAMLỌ (14)
IHE Ise OVda (7)
AKWUKWO OGUGU (255)
Eziokwu siri ike (44)
OZI ỌH NEWR NEW ỌH NEWR NEW (10)
ETmụ anụmanụ (5)
Oge amara (123)
OZI WARDỌ AKA NA NT WAR! (10)
VIDIO & PODCASTS (84)
CHERE OBERE OGE (4)
EBE EGO ELUIGWE (7)
N'IHI gịnị Katọlik? (9)
Archives Họrọ net June 2022 (3) Ike 2022 (2) Eprel 2022 (2) Machị 2022 (5) Febụwarị 2022 (5) Jenụwarị 2022 (7) Disemba 2021 (7) Nọvemba 2021 (7) Ọktọba 2021 (6) Septemba 2021 (5) Ọgọstụ 2021 (5) Julaị 2021 (3) June 2021 (2) Ike 2021 (6) Eprel 2021 (6) Machị 2021 (9) Febụwarị 2021 (10) Jenụwarị 2021 (9) Disemba 2020 (9) Nọvemba 2020 (8) Ọktọba 2020 (15) Septemba 2020 (6) Ọgọstụ 2020 (6) Julaị 2020 (10) June 2020 (13) Ike 2020 (9) Eprel 2020 (11) Machị 2020 (12) Febụwarị 2020 (7) Jenụwarị 2020 (10) Disemba 2019 (7) Nọvemba 2019 (11) Ọktọba 2019 (7) Septemba 2019 (6) Ọgọstụ 2019 (1) Julaị 2019 (4) June 2019 (6) Ike 2019 (9) Eprel 2019 (15) Machị 2019 (5) Febụwarị 2019 (9) Jenụwarị 2019 (7) Disemba 2018 (3) Nọvemba 2018 (10) Ọktọba 2018 (8) Septemba 2018 (5) Ọgọstụ 2018 (4) Julaị 2018 (2) June 2018 (6) Ike 2018 (13) Eprel 2018 (10) Machị 2018 (8) Febụwarị 2018 (13) Jenụwarị 2018 (11) Disemba 2017 (10) Nọvemba 2017 (10) Ọktọba 2017 (11) Septemba 2017 (9) Ọgọstụ 2017 (11) Julaị 2017 (9) June 2017 (9) Ike 2017 (10) Eprel 2017 (8) Machị 2017 (9) Febụwarị 2017 (8) Jenụwarị 2017 (9) Disemba 2016 (14) Nọvemba 2016 (13) Ọktọba 2016 (6) Septemba 2016 (15) Ọgọstụ 2016 (7) Julaị 2016 (6) June 2016 (8) Ike 2016 (10) Eprel 2016 (7) Machị 2016 (25) Febụwarị 2016 (21) Jenụwarị 2016 (8) Disemba 2015 (7) Nọvemba 2015 (9) Ọktọba 2015 (11) Septemba 2015 (9) Ọgọstụ 2015 (5) Julaị 2015 (8) June 2015 (8) Ike 2015 (9) Eprel 2015 (9) Machị 2015 (27) Febụwarị 2015 (17) Jenụwarị 2015 (11) Disemba 2014 (10) Nọvemba 2014 (7) Ọktọba 2014 (21) Septemba 2014 (21) Ọgọstụ 2014 (6) Julaị 2014 (6) June 2014 (5) Ike 2014 (19) Eprel 2014 (22) Machị 2014 (26) Febụwarị 2014 (24) Jenụwarị 2014 (27) Disemba 2013 (24) Nọvemba 2013 (6) Ọktọba 2013 (5) Septemba 2013 (3) Ọgọstụ 2013 (2) Julaị 2013 (4) June 2013 (1) Ike 2013 (6) Eprel 2013 (7) Machị 2013 (11) Febụwarị 2013 (10) Jenụwarị 2013 (3) Disemba 2012 (2) Nọvemba 2012 (3) Ọktọba 2012 (3) Septemba 2012 (5) Ọgọstụ 2012 (1) Julaị 2012 (3) June 2012 (5) Ike 2012 (2) Eprel 2012 (5) Machị 2012 (5) Febụwarị 2012 (7) Jenụwarị 2012 (6) Disemba 2011 (8) Nọvemba 2011 (6) Ọktọba 2011 (7) Septemba 2011 (3) Ọgọstụ 2011 (5) Julaị 2011 (4) June 2011 (9) Ike 2011 (4) Eprel 2011 (1) Machị 2011 (4) Febụwarị 2011 (3) Jenụwarị 2011 (7) Disemba 2010 (7) Nọvemba 2010 (5) Ọktọba 2010 (5) Septemba 2010 (5) Ọgọstụ 2010 (3) Julaị 2010 (5) June 2010 (7) Ike 2010 (9) Eprel 2010 (14) Machị 2010 (8) Febụwarị 2010 (8) Jenụwarị 2010 (5) Disemba 2009 (8) Nọvemba 2009 (6) Ọktọba 2009 (5) Septemba 2009 (4) Ọgọstụ 2009 (4) Julaị 2009 (7) June 2009 (7) Ike 2009 (5) Eprel 2009 (8) Machị 2009 (2) Febụwarị 2009 (8) Jenụwarị 2009 (13) Disemba 2008 (10) Nọvemba 2008 (9) Ọktọba 2008 (11) Septemba 2008 (10) Ọgọstụ 2008 (7) Julaị 2008 (2) June 2008 (5) Ike 2008 (7) Eprel 2008 (8) Machị 2008 (10) Febụwarị 2008 (7) Jenụwarị 2008 (5) Disemba 2007 (12) Nọvemba 2007 (9) Ọktọba 2007 (5) Septemba 2007 (10) Ọgọstụ 2007 (8) Julaị 2007 (5) June 2007 (5) Ike 2007 (6) Eprel 2007 (7) Machị 2007 (4) Febụwarị 2007 (6) Jenụwarị 2007 (10) Disemba 2006 (9) Nọvemba 2006 (10) Ọktọba 2006 (10) Septemba 2006 (24) Ọgọstụ 2006 (19) Julaị 2006 (16) June 2006 (21) Ike 2006 (17) Eprel 2006 (19) Machị 2006 (22) Febụwarị 2006 (16) Jenụwarị 2006 (16) Disemba 2005 (10) Nọvemba 2005 (1) June 2005 (1) Eprel 2003 (1) Machị 2003 (1)
Nhazi weebụsaịtị © 2022 TiDign
A Ebe Mmalite isiokwu
0	Facebook ozi
0	n'akpa uwe
Kwadoro site na Nchịkọta mmekọrịta